Archive du 20200425
KMF/CNOE « Takon’ny serasera politika ny serasera medikaly. »
Manoloana ny adihevitra nateraky ny fampiasana ny COVID Organics dia nanambara ny KMF/CNOE na komity manara-maso ny fiainam-pirenena fa ny
Malagasy tavela any ivelany Tsy afaka mody aloha ...
Ny 19 martsa teo no nandray sidina farany avy any ivelany i Madagasikara. Nilaza omaly ny minisitry ny fitaterana sy ny fizahantany, Joel Randriamanjato,
Volana masina Ramadany Manomboka anio sabotsy
Manomboka anio sabotsy 25 aprily ny volana masina Ramadany ho an’ireo mpino Slamo maneran-tany.
Baolina kitra Malagasy Nanome toromarika fohy ny tale teknikan’ny FMF
Nanome toromarika fohy ho an’ny mpilalao sy mpitantana ary mpanazatra ny baolina kitra Malagasy, Atoa Debon Jean François tale teknikan’ny FMF “Federasion’ny Baolina kitra Malagasy” amin’izao fiatrehana ny fijanonana an-trano ataontsika izao.
Tapim-bava avo lenta !
Tsy nampitovy hevitra ny samy Malagasy ny mahakasika ilay tambavy ambara fanafodin’ny valanaretina coronavirus.
Toekarena “Mila mijery lavitra ny governemanta”
Nametraka ny ahiahiany ny solombavambahoaka Todisoa Andriamampandry manoloana ny krizy ateraky ny COVID-19.
Sekoly tsy miankina Misy mampadoa antsasaky ny saram-pianarana
Efa nambara teto fa misy sekoly tsy miankina tsy nampandoa saram-pianarana volana aprily hitsinjovana ireo ray amandreny.
Madame Mariah – Mpitsabo nentim-paharazana “Simban’ny serasera be loatra ny fiainantsika.”
Tsy mbola nisy ravin-kazo natao hamparary izany, hoy ny mpitsabo nentim-paharazana,
Beloha-sur-mer Maty nokapaina famaky ny Chef ZAP
Omaly tamin’ny 2ora maraina no nisy jiolahy tonga hangalatra ny kisoa tao amin’ny Lehiben’ny Fari-piadidiam-pampianarana na ny Chef ZAP tao Beloha-Sur-Mer.
Fanaovana sinto-mahery Olona 6 voasombotra teny Analakely
Olona 06 no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny CSP1 Analakely ny Alahady 23 Aprily lasa teo noho ny resaka sinto-mahery .
Halatra vary akotry Lehilahy roa voasambotra tany Manja
Lehilahy roa no voasambotry ny polisy miasa ao Manja ny 24 aprily teo noho ny resaka fangalarana vary akotry (paddy).
Andrana vaksiny any Eoropa 12 hatramin` ny 18 volana vao fantatra raha mandaitra
Royaume-Uni sy Allemgne no nanomboka ny andrana vaksiny ho fanefitry ny COVID-19 any Eoropa omaly.
Mpianatra mipetraka eny Ankatso Mitaraina ho sahirana miatrika ny COVID 19
Mba ho fanampiana ireo mpianatry ny oniversite mipetraka eny Ankatso dia nanao tsipaipaika ireo mpikambana eo anivon’ny fikambanan’ny mpianatra
Hetsika ROHY Tsy nirindra ny fampiharana ireo fepetra
Mahafantatra ny otrikaretina ny olona tany amin’ny 98% amin’ireo distrika 98 nanaovan’ny Firaisamonim-pirenena Rohy fanadihadiana.
Sazy ho an’ireo tsy manao arotava Tena mbola maivana ny eto Madagasikara
Mety misy gaga hoe inona no hampisehoana hery be amin’izao ady amin’ny Coronavirus izao, hoy ny Jeneraly Ravalomanana Richard Sekreteram-panjakana miadididy ny zandarimaria.
Taorian’ny fihaonana tamin’ny Filoha Nanaiky ny Covid Organics indray ny ANANEM
Ny 20 aprily no nanambaran’ny ANAMEM (Académie Nationale de Médecine de Madagascar) ivondronan’ny manam-pahaizana sy mpikaroka amin’ny fitsaboana sy mpisehatra amin’ny fahasalamana,
Covid Organics Liana ny mponina ao Antananarivo
Raha ny zava-misy dia mitombo ny isan` ireo olona sitran` ny “coronavirus” eto Madagasikara .
Ady atao amin’ny Covid 19 Notohizana ny fiandrasan-draharaha eny anivon’ny ministera
Manomboka miverina tsikelikely amin’ny fiainana andavanandro ny rehetra.